အီဂွါနိုဒွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
Temporal range: en:Early Cretaceous (en:Barremian to en:Aptian), 126–122 Ma
I. bernissartensis mounted in modern quadrupedal posture, en:Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels
†I. anglicus Holl, 1829 (en:nomen dubium)
အီဂွါနိုဒွန် (Iganodon) သည် အော်နီသိုပေါ့ (Ornithopod) အုပ်စုမှ ဒိုင်နိုဆောမျိုးဖြစ်ပြီး ဂျူးရာဆစ်ယုဂ် (Jurassic Period)အတွင်း ပေါ်ပေါက်ကျက်စားခဲ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည် ၈ မီတာခန့်ရှည်ပြီး သန်မာသောနောက်ခြေထာက်နှစ်ချောင်းကိုအားပြု၍ လမ်းလျှောကတက်သော သတ္တဝါဖြစ်၏။ ရှေ့ခြေများမှာ တိုပြီး ခြေချောင်းလေးချောင်းပါရှိသည်။ ထို့ပြင် လူ့လက်မကဲ့သို့ အတက်တစ်ခုစီပါရှိသေး၏။ သွားများမှာသေးငယ်၍ တုံးသဖြင့် သီးရွက်စားသတ္တဝါဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယမ်ပြည်ရှိ ကျောက်မီးသွေးတွင်းတစ်ခုတွင် အီဂွါနိုဒွန် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းစု ၂၀ ထက်မနည်း တွေ့ရသည်။
အီဂွါနိုဒွန်၏ ပထမဦးဆုံးကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို ၁၈၂၂ တွင် အင်္ဂလန်၌ တွေ့ရသည်။ စတင်တွေ့ရှိရသည်မှာ အီဂွါနိုဒွန်၏ လူ့လက်မကဲ့သို့သော အတက်ဖြစ်ပြီး ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာဂီဒီယွန်မင်တယ်၏ ဇနီးကတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်၏။ ဂီဒီယွန်မင်တယ်သည် ထိုကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင် ဗေရွန်ဂျော့ကူးဗီးယေးထံ ပေးပို့စစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကြံ့တစ်ကောင်၏ သွားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကူဗီယေးက ပြောခဲ့၏။ ဂီဒီယွန်မင်တယ်သည် ထိုယူဆချက်ကို ဘဝင်မကျ၍ ပိုမိုပြည့်စုံသော အရိုးစုကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို ဆက်လက်စုဆောင်းခဲ့သည်။ ရုပ်ကြွင်းအရိုးစုတို့ကို ပြည့်စုံစွာရရှိသောအခါ ထိသတ္တဝါသည် ယခုခေတ် အီဂွါနာ(ဖွတ်)နှင့် သဏ္ဌာန်တူသည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် အီဂွါနိုဒွန်ဟု အမည်ပေးခဲ့၏။ ဤဖြစ်ရပ်များသည် ဒါဝင်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီ မပေါ်မီ နှစ် ၃၀ ခန့်ကဖြစ်ခဲ့သည်။
↑ Mantell, Gideon A. (1825). "Notice on the Iguanodon,anewly discovered fossil reptile, from the sandstone of Tilgate forest, in Sussex". Philosophical Transactions of the Royal Society 115: 179–186. doi:10.1098/rstl.1825.0010. ISSN 0261-0523. Bibcode: 1825RSPT..115..179M.
↑ "Perinates ofanew species of Iguanodon (Ornithischia: Ornithopoda) from the lower Barremian of Galve (Teruel, Spain)" (2015). Cretaceous Research 56: 250–264. doi:10.1016/j.cretres.2015.05.010.
↑ "Delapparentia turolensis nov. gen et sp., un nuevo dinosaurio iguanodontoideo (Ornithischia: Ornithopoda) en el Cretácico Inferior de Galve" (2011). Estudios Geológicos 67: 83–110. doi:10.3989/egeol.40276.124.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီဂွါနိုဒွန်&oldid=721444" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။